Vonjy taitra COVID: Sidina avy any India voatazona any Roma
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Vonjy taitra COVID: Sidina avy any India voatazona any Roma
Sidina vonjy maika COVID avy any India voatazona any Roma
Mpandeha maherin'ny 200 avy any India no tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Fuimicino any Roma, Italia, anio ary notsapaina avy hatrany ny fitsapana antigen COVID-19. Nozaraina teo anelanelan'ny hopitaly miaramila Cecchignola sy hotely voatondro ho an'ny COVID.
Noho ny fihenan'ny toe-javatra COVID any India, ireo mpitsangatsangana tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Fuimicino any Roma dia niharan'ny fepetra ara-pahasalamana vaovao.
Ankoatry ny fitsapana ny mari-pana sy ny swab, ny mpandeha kosa nalefa nivantana tany amin'ny foibe karantina.
Alohan'ny hamoahana azy avy any afovoan-tanàna dia tsy maintsy mandalo fitsapana COVID hafa ny mpandeha amin'ny famakiana ratsy.
UPDATE: 23 avy teny amin'ny sambo no nanaporofo fa tsara ny COVID, anisan'izany ny mpampiantrano iray.
Ny rafitry ny fahasalamana sy ny fanampiana ao amin'ny seranam-piaramanidina Fiumicino dia feno fitandremana satria ireo mpandeha 214 avy any India tonga tamin'ny 9 ora sy sasany alina tao amin'ny Airoe's Boeing 30 nidina. Norefesin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny hafanan'ny mpitsangatsangana tsirairay ary notarihiny ho any amin'ny efitrano voatokana ao amin'ny Terminal 787. Avy eo ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina dia nanao ny savony antigenika voalohany tany amin'ny tobim-pahasalamana izay natsangana avy hatrany taorian'ny fahatongavan'ilay fiaramanidina.
Ny kitapo mpandeha 350 dia voadio avokoa, ary misy fiaran'ny Vokovoko Mena 9 miandry, ao anatin'izany ny mpanazatra 3 sy ny fiara mpamonjy voina 6, ary koa ny mpanazatra 3 sy ny fiaran'ny tafika kely telo hafa. Ny fiara dia hitondra ny mpandeha any amin'ny fotodrafitrasa 3 eto an-drenivohitra hanaovana fitsapana swab ary hijerena bebe kokoa ny mety fisian'ny tranga misy ny Indiana tsy mitovy amin'ny virus coronavirus, araka ny loharanom-baovao nasionaly momba ny fiarovana sivily.
Manokana, 50 no handeha ho any amin'ny trano mimanda ao Cecchignola, fa ny hafa kosa ho any amin'ny hotely voatondro ho an'ny COVID. Ireo mpiasa mitantana ny India ny mpandeha dia nanao fivoriana fandrindrana momba ity raharaha ity miaraka amin'ny Fiarovana sivily faritra Lazio.